मेरो ल्यापटप ब्याट्री किन चार्ज भइरहेको छैन? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
अप्रिल 17, 2021 अप्रिल 13, 2021 एल्सा विवाह ब्लग, विशेष समाचार, प्रविधि
निश्चित गर्नुहोस् कि ल्यापटप प्लग इन गरिएको छ।
आज, USB-C धेरै उपकरणहरूको लागि मानक कनेक्टर हो।
यदि एडेप्टर पर्याप्त शक्तिशाली छैन, यसले तपाईंको ल्यापटप ब्याट्री चार्ज गर्दैन।
यदि तपाईंले तपाईंको ल्यापटपमा प्लग इन गर्नुभयो तर यो चार्ज गरिरहेको छैन भने, त्यहाँ केही गलत छ। कुनै समय, ब्याट्री पूर्ण रूपले सूखाइन्छ, जसले उपकरणलाई कुनै शक्ति प्रदान गर्दैन। तर यदि तपाइँ एडेप्टर जडान गर्नुभएको छ तर त्यहाँ चम्किरहेको प्रकाश, कुनै उज्यालो प्रदर्शन, वा कुनै चार्जिंग सूचक छैन भने, तपाइँले समस्या निदान गर्न केहि चरणहरू लिनुपर्दछ। यस लेखमा हामी तपाईंलाई समस्या समाधान गर्नका लागि केहि सुझावहरू साझेदारी गर्दैछौं। मा पढ्नुहोस्
यदि तपाईंको ल्यापटपमा हटाउन योग्य ब्याट्री छ भने, यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। अब, केहि सेकेन्डको लागि पावर बटन थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्। विचार डिभाइस पूर्ण रूपमा निकाल्नु हो। पछि, उपकरणमा प्लग गर्नुहोस् र ल्यापटपमा स्विच गर्नुहोस्।
१. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं प्लग इन हुनुहुन्छ
सर्वप्रथम, यो निश्चित गर्नुहोस् कि ल्यापटप प्लग इन गरिएको छ। साथै, यो पक्का गर्नुहोस् कि प्लग ठीकसँग बसेको छ। सबै हटाउने कर्डहरू पूर्ण रूपमा सम्मिलित हुनुपर्दछ र ब्याट्री राम्रोसँग सिट हुनुपर्दछ।
२. ब्याट्री हटाउनुहोस्
यस चालले ठीकसँग काम गर्नुपर्दछ। तर यदि यो गर्दैन भने, सम्भावनाहरू यो छ कि तपाईंसँग बम ब्याट्री छ जुन बदल्नु पर्छ।
The. दायाँ USB-C पोर्ट प्रयोग गर्नुहोस्
आज, USB-C धेरै उपकरणहरूको लागि मानक कनेक्टर हो। यसले पेरिफेरल्स स्थानान्तरण डाटा र बैटरी रिचार्ज गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग गैर-चार्जिंग मुद्दा छ भने, तपाईं गलत पोर्टमा जडान हुनुभएको छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्।
A. शक्तिशाली चार्जर प्रयोग गर्नुहोस्
यदि एडेप्टर पर्याप्त शक्तिशाली छैन, यसले तपाईंको ल्यापटप ब्याट्री चार्ज गर्दैन। चार्जरको वाट्स जाँच गर्नु पर्छ। यद्यपि एक कम वाट्टेज चार्जरले ब्याट्रीलाई बग्नबाट रोक्न सक्दछ, यो चार्ज गर्न पर्याप्त शक्तिशाली हुँदैन।
Sh. शॉर्ट्स, बर्नआउट्स, र ब्रेकहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्
कुनै ब्रेक वा किन्क्सका लागि केबल जाँच गर्नुहोस्। अन्त्यमा कुनै टुक्रिएको जडान हुनु हुँदैन। कहिलेकाँही, घरपालुवा जनावरले एड्याप्टर केबुलमा च्यु हुन्छ। AC ईंटको रंग बिर्किनु हुँदैन र कुनै भाग विस्तार वा warped हुनु हुँदैन। साथै, AC ईंटको सुँघेर पनी सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो गन्ध हुँदैन जस्तो कि प्लास्टिकको जलाइएको छैन। यदि यो जस्तो सुगन्ध छ भने, तपाईंले पावर कनेक्टर बदल्न कोशिस गर्नुपर्छ।
The. कनेक्टर जाँच गर्नुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि कनेक्टर पर्याप्त ठोस छ। ज्याकमा कुनै माटो वा धुलो हुँदैन। तपाईं ज्याक सफा गर्न फेरि टुथपिक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र फेरि फेरी इन गर्नुहोस्। केहि केसहरूमा, ज्याक ढीला वा चिल्ला हुन्छ, जसको मतलब हो कि ज्याक भाँचिएको छ र मर्मत गर्नु आवश्यक छ।
ब्याट्रीहरु अधिक गर्मी को लागी गर्छ।
7. तातो हरा
ब्याट्रीहरु अधिक गर्मी को लागी गर्छ। जब तापमानले एक निश्चित सीमा नाघ्छ, सेन्सर गलत फायर हुन सक्छ। यसले चार्जिंग मुद्दाहरूको पनि साथ दिन्छ। सामान्यतया, यी समस्याहरू पुरानो ल्यापटपहरूमा सामान्य छन् किनकि उनीहरूसँग कम-गुणस्तरको शीतलन प्रणाली छ।
यस अवस्थामा, तपाईंले उपकरणलाई बन्द गर्नुपर्दछ र ब्याट्री शान्त हुन केही बेर पर्खनु पर्छ। र, पक्का गर्नुहोस् कि हावा भेन्टहरू भरिएका छैनन्।
The. ब्याट्री परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि कुनै चालले समस्या समाधान गरेन भने हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले नयाँ पावर एडाप्टर वा ब्याट्री किन्नुहोस्। यो उत्तम छ कि तपाई प्रतिष्ठित निर्माताबाट ब्याट्री किन्नुहोस्। तेस्रो-पक्ष ब्याट्री प्रयोग सिफारिस छैन।
संक्षेप मा, यदि तपाइँको ल्यापटप ब्याट्री चार्ज छैन, तपाईं समस्या सुल्झाउन र समस्या समाधान गर्न यी सुझावहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंको ल्यापटप ब्याट्री खराब छ भने तपाईंले बदल्ने ब्याट्री लिनु पर्छ। प्रतिस्थापन ब्याट्रीहरूमा, तपाई ल्यापटप ब्याट्रीहरूको एक महान संग्रह पाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई उत्तम छनौट गर्न मद्दत गर्दछ।
ब्याट्री चार्ज हुँदै छैन सांप्रदायिक समाचार ल्यापटप ब्याट्री